I-Blockchain - Ikusasa Lobuchwepheshe Bezezimali » Martech Zone
IBlockchain - Ikusasa Lobuchwepheshe Bezezimali
ULwesibili, April 2, 2019 ULwesibili, April 2, 2019 UKenneth Evans
Isikhathi sokufunda: 4 imizuzu
Amagama i-cryptocurrency ne-blockchain manje atholakala yonke indawo. Ukunaka komphakathi okunjalo kungachazwa ngezinto ezimbili: izindleko eziphezulu zeBitcoin cryptocurrency kanye nobunzima bokuqonda okushiwo ubuchwepheshe. Umlando wokuvela kwemali yokuqala yedijithali kanye nobuchwepheshe obuyisisekelo be-P2P buzosisiza ukuba siqonde lezi "zhlathi ze-crypto".
Kunezincazelo ezimbili zeBlockchain:
• Uchungechunge oluqhubekayo lokulandelana lwamabhulokhi aqukethe imininingwane.
• Imininingwane ehanjisiwe ephindaphindwayo;
Ziyiqiniso zombili kokuqukethwe kwazo kepha azinikezi impendulo embuzweni wokuthi iyini. Ukuqonda kangcono ubuchwepheshe, kuyadingeka ukuthi ukhumbule ukuthi yiziphi izakhiwo zenethiwekhi yamakhompiyutha ezikhona nokuthi yiziphi zazo ezilawula imakethe yezinhlelo ze-IT zanamuhla.
Sekukonke kunezinhlobo ezimbili zezakhiwo:
Ukuxhumana ngendlela yokuqala kusho ukulawulwa okuphakathi kwayo yonke into: izinhlelo zokusebenza, idatha, ukufinyelela. Yonke i-logic yohlelo nolwazi kufihliwe ngaphakathi kweseva, okunciphisa izidingo zokusebenza kwamadivayisi amaklayenti futhi kuqinisekise isivinini sokucubungula. Le ndlela ithole ukunakwa okukhulu ezinsukwini zethu.
I-peer-to-peer noma amanethiwekhi we-decentralized akanayo i-master device, futhi bonke ababambiqhaza banamalungelo alinganayo. Kule modeli, umsebenzisi ngamunye akayena umthengi kuphela kepha futhi uba ngumhlinzeki wesevisi.
Uhlobo lwangaphambilini lwamanethiwekhi ontanga kuya kontanga uhlelo lwe-USENET olusatshalaliswa lwemiyalezo olwenziwe ngo-1979. Eminyakeni engamashumi amabili eyalandela kwaphawulwa ngokwakhiwa kwe-P2P (Peer-to-Peer) - izicelo emikhakheni ehluke ngokuphelele. Esinye sezibonelo esidume kakhulu isevisi yeNapster, inethiwekhi yokwabelana ngefayela eyake yathandwa, noma i-BOINC, ipulatifomu yesoftware yekhompyutha esatshalaliswayo, kanye ne-BitTorrent protocol, eyisisekelo samakhasimende wesifufula sanamuhla.
Amasistimu asuselwa kumanethiwekhi we-decentralized ayaqhubeka akhona, kepha ngokusobala alahlekelwa yi-server-server ekwandeni nasekulandeleni izidingo zabathengi.
Iningi lezinhlelo zokusebenza nezinhlelo zokusebenza okujwayelekile zidinga amandla wokusebenzisa isethi yedatha. Kunezindlela eziningi zokuhlela umsebenzi onjalo futhi enye yazo isebenzisa indlela yontanga. Imininingwane esatshalalisiwe, noma ehambisanayo ihlukaniswa iqiniso lokuthi imininingwane engxenyeni noma ephelele igcinwa kudivayisi ngayinye yenethiwekhi.
Enye yezinzuzo zohlelo olunjalo ukutholakala kwedatha: alikho iphuzu elilodwa lokwehluleka, njengoba kunjalo nge-database etholakala kuseva eyodwa. Lesi sixazululo futhi sinemikhawulo ethile kusivinini sokuvuselela idatha nokusabalalisa phakathi kwamalungu enethiwekhi. Uhlelo olunjalo ngeke lumelane nomthwalo wezigidi zabasebenzisi abahlala beshicilela imininingwane emisha.
Ubuchwepheshe be-blockchain buthatha ukusetshenziswa kwedathabheythi esatshalalisiwe yamabhulokhi, okuluhlu oluxhumekile (ibhulokhi ngalinye elilandelayo liqukethe okokuhlonza okwedlule). Ilungu ngalinye lenethiwekhi ligcina ikhophi lakho konke ukusebenza okwenzelwe sonke isikhathi. Lokhu bekungeke kwenzeke ngaphandle kwezinto ezithile ezintsha ezenzelwe ukuqinisekisa ukuphepha nokutholakala kwenethiwekhi. Lokhu kusiletha "ensikeni" yokugcina ye-blockchain - i-cryptography. Kufanele uxhumane ne- inkampani yokuthuthukisa uhlelo lokusebenza leselula ukuqasha onjiniyela be-blockchain ukuhlanganisa lobu buchwepheshe kubhizinisi lakho.
Ngemuva kokutadisha izinto eziyinhloko nomlando wokwenziwa kobuchwepheshe, sekuyisikhathi sokuqeda inkoleloze ehambisana negama elithi "blockchain". Cabanga ngesibonelo esilula sokushintshaniswa kwemali yedijithali, umgomo wokusebenza kobuchwepheshe be-blockchain ngaphandle kwamakhompyutha.
Ake sithi sineqembu labantu abayi-10 abafuna ukwazi ukwenza imisebenzi yokushintshanisa imali ngaphandle kohlelo lokubhanga. Cabanga ngokulandelana ngezenzo ezenziwa ngabahlanganyeli ohlelweni, lapho i-blockchain izomelwa khona ngamaphepha ajwayelekile:
Umhlanganyeli ngamunye unebhokisi lapho azofaka khona amashidi anemininingwane mayelana nakho konke ukuthengiselana okuqediwe ohlelweni.
Umhlanganyeli ngamunye uhlala nephepha nepeni futhi ukulungele ukuqopha konke okwenziwayo okuzokwenziwa.
Ngesinye isikhathi, umhlanganyeli ongu-2 ufuna ukuthumela ama-dollar ayi-100 kunombolo yomhlanganyeli u-9.
Ukuze uqedele ukuthengiselana, Umbambiqhaza No. 2 umemezela kuwo wonke umuntu: “Ngifuna ukudlulisa amadola ayi-100 aye kuNombolo 9, ngakho-ke bhala lokhu eshidini lakho.”
Ngemuva kwalokho, wonke umuntu ubheka ukuthi ngabe uMhlanganyeli 2 unemali esele ngokwanele ukuqedela okwenziwayo. Uma kunjalo, wonke umuntu wenza inothi mayelana nokuthengiselana kumashidi abo.
Ngemuva kwalokho, okwenziwayo kuthathwa njengokuqediwe.
Ngokuhamba kwesikhathi, abanye ababambiqhaza nabo badinga ukwenza imisebenzi yokushintshanisa. Abahlanganyeli bayaqhubeka nokumemezela nokuqopha ukuthengiselana ngakunye okwenziwe. Esibonelweni sethu, ukuthengiselana okungu-10 kungarekhodwa kushidi elilodwa, ngemuva kwalokho kuyadingeka ukufaka ishidi eligcwalisiwe ebhokisini bese uthatha elisha.
Ukungeza Ishidi Ebhokisini
Iqiniso lokuthi ishidi lifakwa ebhokisini lisho ukuthi bonke ababambiqhaza bavumelana nokusebenza kwayo yonke imisebenzi eyenziwe kanye nokungenzeki kokushintsha ishidi ngokuzayo. Lokhu yilokho okuqinisekisa ubuqotho bakho konke okwenziwayo phakathi kwabahlanganyeli abangathembani.
Isigaba sokugcina siyindaba ejwayelekile yokuxazulula inkinga yojenene baseByzantine. Ezimweni zokuxhumana kwabahlanganyeli bakude, abanye babo okungenzeka ukuthi bangabahlaseli, kuyadingeka ukuthola isu lokuwina labo bonke. Inqubo yokuxazulula le nkinga ingabukwa nge-prism yamamodeli wokuncintisana.
Emkhakheni wezinsimbi zezezimali, i-Bitcoin, ekubeni yi-cryptocurrency yokuqala yokuqala, ngokuqinisekile ikhombisile ukuthi idlalwa kanjani ngemithetho emisha ngaphandle kwabalamuli nokulawula okuvela phezulu. Kodwa-ke, mhlawumbe umphumela obaluleke nakakhulu wokuvela kweBitcoin kwaba ukudala ubuchwepheshe be-blockchain. Xhumana nezinkampani zentuthuko blockchain ukuqasha onjiniyela be-blockchain ukuhlanganisa lobu buchwepheshe kubhizinisi lakho.
Tags: blockchainukuthuthukiswa kwe-blockchainUbuchwepheshe be-blockchainUbuchwepheshe Kwezezimali
UKenneth Evans uyi-Strategist Yokumaketha Okuqukethwe ye Izinkampani Eziphezulu Zokuthuthukiswa Kohlelo Lokusebenza, ipulatifomu yocwaningo yezinkampani ezithuthukisa uhlelo lokusebenza e-USA, UK, India, UAE, Australia nasemhlabeni jikelele. Ubelokhu enikela kuzinkundla ezahlukahlukene zokubloga namaForamu.
Yini iRobotic Process Automation?
Izindlela Ezinhlanu Zokunyusa Igeyimu Yakho Yokumaketha Okuqukethwe